Isbadelka cusub ee caasimadda Soomaaliya (Daawo Sawirro) – Radio Muqdisho
Waa horraanta sannadka 2015-ka, Soomaaliya oo dhan ayaa waxa ay hiigsaneysaa horumar dhinacyo badan leh, kaas oo hannaankiisu masuul ka yahay dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashaneysa shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada beesha caalamka.
Caasimadda Soomaaliya waa xudunta Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, waa halka kulmisa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo mideysan, muuqaalka horumarinneed ee ka socda caasimadda ayaana ka turjumaya midka guud ee waddankeena ka socda, taas oo rajo weyn ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibedda ku nool.
Wax ka yar afar sannadood, ayeey caasimadda ku sameysay horumar muggiisu weyn yahay, waxaana dib u soo laabtay si awood badan ganacsiga, adeegga bulshada iyo dhismaha guud oo isugu jira, waddooyinka Laamiga ah, hoteellada, guryaha magaalada iyo xarumaha dowladda Soomaaliya, taas oo si horu dhac u bilowdey in Dalxiis loo yimaado Muqdisho, waxaana arrintaas ay dhiiragelisay dadaalka dowladda ee ku aaddan dhismaha waddanka guud ahaan.
Caasimadda muddo is xigta waxaa lagu martigaliyey shirka wasiirrada Arrimaha Dibedda IGAD kaddib madaxweynaha dalka Turkiga oo uu dalkiisu ka mid yahay wadamada adduunka ugu horumarsan ayaa booqasho ku yimaadey, taas oo noo furtay waddo cusub oo aan ku hanan karno hiigsashada caasimad la tartami karta kuwa dhiggeeda ah.
Sawirrada muuqaalkoodu idiin muuqdaan waa habeennimadiii Talaadada ee ay Arbacada soo galeysay, waxaana ay ku galinayaan dareen cusub oo caasimaddeena ka turjumaya.
Sawir qaade: Cabdiqaadir Maxamed Xasan (Timoos)